PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-06-17 - ZIXABENE NE-ICASA IZITESHI ZOKUSAKAZA
ZIXABENE NE-ICASA IZITESHI ZOKUSAKAZA
Ilanga langeSonto - 2018-06-17 - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA
KUXABANE ubendle phakathi kweziteshi zomsakazo ezisakaza ngokungemthetho, nehhovisi eligunyaza ukuba semoyeni kwazo i-independent Communications Authority of South Africa (ICASA).
I-ICASA yiyona eshaya amaphiko kwezamagagasi omoya asetshenziswa yimisakazo, ngamathelevishini nezingcingo. Kumele njalo emuva kweminyaka emihlanu iziteshi zomsakazo zomphakathi zivuselele izimvume zazo zokusakaza.
Kubukeka isihluleke yancama I-ICASA ukulawula eziyi-14 ezingenazimvume ezisemthethweni zokusakaza. Ezine zalezi ziteshi zikwazulu-natal - yidivine Touch Radio, Nquthu FM, Siyathuthuka Community Radio NEKZN Capital Radio.
Abaphathi balezi ziteshi abakhulume NELANGA Langesonto bathi I-ICASA izazi kahle izinkinga zabo, yingakho beqhubeka nomsebenzi wokusakaza nakuba bengenazo izimvume zokubasemoyeni. Ngakolunye uhlangothi I-ICASA ithi sebayithumelela imiyalelo yokuba lezi ziteshi zivale imibhobho.
Umnu Thabani Khanyi wenquthu FM uthi izinkinga zabo yinto endala, ziholele ekubeni bangakwazi ukungena emoyeni kwaze kwaphela isikhathi sabo ngoba kunombango ngaphakathi - yingakho- ke manje beqhubeka nokusakaza.
Uthi udaba lwabo belusenkantolo ngoba kukhona abebengafuni ukunikezela ngamandla okuphatha isiteshi, abanye abasakazi bagweva naso isiteshi. Uthi nakanjani sebekulungele ukuqhubeka nomsebenzi futhi NE-ICASA iyakwazi lokho.
Umnu Hamilton Dumisani Myeza wesiyathuthuka obevutha engabaselwe uthi sekuphele iminyaka emithathu golokoqo besakaza bengenayo imvume.
“I- license besiyithole ngo-2010. Sithe uma sithumela isicelo sethu ngo-2015 abangakhipha gama bebe bazi siyaqhubeka nokusakaza njengoba namanje sisalindile. Yibo futhi abasitshele ukuthi usisi obebhekene nodaba lwethu uselivini ngoba ekhulelwe kabangabe besabuyela kithina.
“Kwafika nabedepartment Of Communications sabachazela ngengqinamba ebesinayo. Ngikhuluma nje sinezinyanga ezine sifakelwe ama- studio amasha wuhulumeni, bebengakwenza kanjani lokho uma singekho emthethweni.
“Thina sisebenza ngomthethosisekelo wethu njengoba sekuphele le minyaka emithathu sisemoyeni, nobhekene nodaba lwethu ubusisiwe Mashego wakhona kwa-icaSA uyakwazi lokho,” efunga egomela ukuthi kabayi ndawo.
Laba bezinye ezimbili kabatho- lakalanga. Okuthiwe ukhulumela idivine, umnu Sipho Ngobese, ubengaluphenduli ucingo lwakhe nemiyalezo eshiywe kwisiqophimyalezo, ngokunjalo nomphathi WEKZN Capital Radio umnu Jerry Jones.
Umnu Paseka Maleka uthi laba bahubhuza amanga NGE-ICASA ngokwenzekayo ngoba bona bazi ukuthi izimvume zabo kabazivuselelanga ngakho kakumele babe semoyeni.
“Izicelo zabo bazithumele sekwedlule isikhathi sabazisa ukuthi sekumele bayeke ukusakaza. Inquthu FM nje ithumele isicelo sayo mhlaka-4 June 2018. Imvume YEKZN Capital Radio yaphelelwa yisikhathi ngonovember 2015, kabazange-ke basithumele isicelo sokuvuselela.
Idivine Touch yagcina ukuba yisiteshi esisemthethweni ngomhlaka-3 May 2016. Umthetho uthi ofuna ukuvuselela imvume kumele athumele isicelo kusasele izinyanga eziyi-6 ngaphambi kokufika ekugcineni kwasuke esebenza ngayo.
Bona bathumela isicelo sekudlule izinyanga eziyisikhombisa bephelelwe yisikhathi. Uma beqhubeka nokusakaza sizobafaka umthetho sibaphuce nezinto abazisebenzisayo ukwenza lo msebenzi bengekho emthethweni,” usho kanje.